The iPriest: Nwanne di na mba - Alisonomi
Ọ bu ezie na-asi n'ihe okenye nọrọ ala were hu, nwata agaghi ahu ya ma ọ rigoro n'elu ọji mana ndi kwuru si n'onye ije ka onye isi awọ n'akụkọ mara ihe nke ọkwa. Otego m bidoro nuwa na nwanne di na mba mana ihe mere n'ubọchi tata mere ka okwu a puta ihe. N'akara iri ise n'ise nke di na mbara ugwu nke ikwetọ ka eziokwu a biara doo m anya.
Mgbe anyi na-etolita, anyi na-eche na obodo kachasi obodo nile tee aka bu Panya. Ọ na-abu ndi nna nna anyi ha chọrọ ikọwa n'obodo tere aka ha asi anyi na ọ di ka panya. Mana taa, anyi amarala na panya dika agbata obi ndi Igbo. N'ezie, onye gara obodo ufọdu na mba ofesi ga amata n'obodo di n'iche n'iche. Nke kacha njọ abụghi nani n'ụfọdu obodo nke mba ofesi tere aka kama na omume ha na nke anyi di ka ututu n'abali. Nri ha, asusu ha, ekike ha na ihe ndi ọzọ bu njiri mara ha dicha iche na nke ndi Igbo. Ọ bu n'obodo di etu a ka m huru onwe m eri afọ ise gara aga. Na-agbanyeghi ihu n'anya ha nwere n'ebem nọ, ọ bughi mmadu ga-agwa m n'ebe m bi tere aka.
Ọ bu n'ebe di etu a ka m biara maka mmeme ndi okenye ndi obodo na-eme kwa afọ. Ndi okenye ma ndi umuaka dika kpakpa ndo di n'igwe mana onweghi ma otu onye ntụtụ isi ya dika nke m. Imi ha ma ahu ha adighikwa ka nke m.
Mgbe m nọ na-eche etu m siri di iche n'ime igwe mmadu ahu ka m huru otu nwa okorobia na-agafe na ebe eteghi aka. Ọ bughi nani na-ahubeghi m nwaokrobia ahu na mbu kama na ọ bughi onye Afrika. Ndi enyi m mu na ha nọọ nso bidoro juba ma mghugo nwanne m nwoke? Mgbe ahu ka m mara na nwanne di na mba.
Posted by The iPriest at 1:20:00 am